कोरोना भाइरसबाट नआत्तिऔँ, तर हात धुन चाहिँ नबिर्सौं - Bidur Khabar
कोरोना भाइरसबाट नआत्तिऔँ, तर हात धुन चाहिँ नबिर्सौं
विदुर खबर २०७६ फागुन २४ गते १९:४३
यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रकोपले पूरै विश्व त्रसित छ । शनिबारसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख नाघेको छ ।
अहिलेसम्म ८७ देशमा फैलिसकेको कोरानाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने करिब ३ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् हालसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट ३ हजार ३ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट फर्केका एक युवक कोरोनाबाट निको भइसकेपछि नेपालमा भने अहिलेसम्म १ जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छैन ।
चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली र जापानमा कोरोना संक्रमण अन्य देशको तुलनामा बढी देखिएको छ । यद्यपी, कोराना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या पनि बढेको छ । हालसम्म ५२ हजारभन्दा बढी निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइ घर फर्किसकेका छन् ।
मृत्यु हुनेमा दीर्घ रोग र बढी उमेर समूहका मानिसहरुको संख्या बढी छ । महिलाकोे तुलनामा पुरुषको संख्या बढी छ भने बालबालिका र ३० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा संक्रमण एवं मृत्यु हुनेको संख्या झनै न्यून छ ।
तर, यसको फैलँदो क्रमका कारण कोरोना भाइरसबाट विश्व नै त्रसित बनेको छ ।
संक्रमित रोगका कारण मानवले त्रास बेहोर्नु परेको यो पहिलो पटक भने होइन । शताब्दी अघि पहिलो विश्वयुद्धबाट शान्तिको स्वास फेर्न सुरु गरेको विश्वलाई ‘स्पेनिस फ्लु’ ले ठूलो संकटमा पारेको थियो ।
विश्वयुद्धमा २ करोडभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । तर, स्पेनिस फ्लुका कारण ५ देखि १० करोड मानिसको ज्यान गएको अनुमान छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र सामान्य रुघाखोकीको लक्षण लगभग एउटै किसिमको देखिएको छ । संक्रमणपछि सामान्य रुघाखोकी लागेजस्तै गरी मानिसलाई सञ्चो हुन्छ । तर, थोरै मानिसमा यसको जटिल समस्या देखिन्छ
विश्वयुद्धका बेला सैनिक क्याम्पहरुबाट उत्पन्न भएको अनुमान गरिएको भाइरसबाट ५० करोडभन्दा बढीमा संक्रमित भएका थिए । स्पेनिस फ्लुबाट विश्वको एकतिहाइ जनसंख्या संक्रमित भएको थियो भने देखि ३ प्रतिशत संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसैले, कोरोना भाइरसबाट धेरै नै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । यद्यपी, यसको संक्रमण न्युन गर्नु अथवा सर्न नदिनु अत्यावश्यक छ ।
यो रोकथामका लागि वैज्ञानिक एवं फर्मास्ट्यिुकल्सहरुबीच कोरोना भाइरसको खोपको दौड चलिरहेको छ । यद्यपी हाल परीक्षणका लागि पठाइएका खोप प्रयोगमा आउन कम्तिमा १८ महिना लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । त्यसकारण, संक्रमण हुन नदिनु नै कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय हो ।
कोरोना भाइरस एक भाइरसमात्र होइन, यो भाइरसहरुको एक ठूलो समूह हो । यो भाइरसको समूहले श्वास प्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ ।
हाल प्रकोप फैलिएको कोरोना भाइरसको समुहलाई ‘कोभिड–१९’ नाम दिइएको छ । यस्तै समूहको भाइरसको प्रकोप सन् २०१२ मा पनि फैलिएको थियो ।
त्यतिबेला साउदी अरेबियामा पहिलो पटक देखिएको यसै समूहको भाइरसको संक्रमणलाई ‘मध्यपूर्वी श्वास प्रश्वास समस्या’ (मेर्स) नाम दिइएको थियो ।
सन् २०१७ सम्म विश्वका २१ देशमा २ हजार जनामा संक्रमण भेटिएको थियो भने ६ सयको मृत्यु भएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो समूहको भाइरसले भविष्यमा महामारी फैलाउन सक्ने उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै, कोरोना भाइरस समूहकै ‘गम्भीर श्वास प्रश्वास समस्या’ सार्सकोे प्रकोप सन् २००३ तिर फैलिएको थियो । अहिलेसम्म यो समूहका भाइरसको संक्रमण चमेरा, उँट र मानिसमा फेला परेको छ ।
कोभिड–१९ ले ‘कोरोना भाइरस–२०१९’ भन्ने जनाउँछ । सुरुमा ‘वुहान भाइरस’ नाम दिन खोजिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नमिलेपछि यसको नाम परिवर्तन गरिएको थियो ।
के गर्छ कोरोना भाइरसले ?
कोभिड–१९ धेरै भन्दा धेरै रुघासँग मेल खाएको देखिएको छ । यसबाट संक्रमित धेरैजसोमा लगातार खोक्ने, ज्वरो आउने, नाकबाट पानी बग्ने, दुख्ने र पीडा हुने लक्षण देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार धेरै मानिसहरु संक्रमणपछि केही दिन बिरामी पर्छन् र त्यसपछि आफै निको हुन्छन् ।
तर, २० प्रतिशतभन्दा कम मानिस, जसमा पहिलादेखि नै दम, मधुमेह लगायत श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ र ६० वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहका छन्, उनीहरुमा अन्यको तुलनामा जटिल समस्या देखिएको छ । यस्ता बिरामीमा निमोनियाको सम्भावना बढी देखिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर ३.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन मौसमी रुघाका कारण मृत्यु हुनेदर १ प्रतिशतभन्दा बढी त हो नै । तर संक्रमितका तुलनामा यो त्यति ठूलो संख्या भने होइन ।
१० प्रतिशत मृत्युदर रहेको सार्स र ३० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्युदर रहेको मेर्सको तुलनामा कोभिड–१९ को मृत्युदर कम नै हो । तर, पनि मुटु रोग र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरुमा मृत्युको जोखिम बढी छ । त्यसकारण चीनले यसकाविरुद्ध गम्भीर कदम चालेको छ ।
यो रोगका कारण मानिसहरु बढी आत्तिनुको अर्काे कारण यसको संक्रामक क्षमता बढी देखिनु पनि हो । यो फैलिन नदिनका लागि सचेतना गराउने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत ठोस कदम चालिरहेको छ ।
संक्रमणबाट बच्ने उपाय
कोभिड–१९ को संक्रमण र सामान्य रुघाखोकीको लक्षण लगभग एउटै किसिमको देखिएको छ । संक्रमणपछि सामान्य रुघाखोकी लागेजस्तै गरी मानिसलाई सञ्चो हुन्छ । तर, थोरै मानिसमा यसको जटिल समस्या देखिन्छ ।
त्यसकारण जाँचविना संक्रमित व्यक्ति पहिचान र संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन कठिन देखिएको छ । संक्रमणबाट बच्न र संक्रमण हुन नदिन प्रत्येकले सतर्कतास्वरुप निम्न उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
साबुन पानीले बेला–बेला राम्रो हात धुनु संक्रमणबाट बच्ने पहिलो उपाय हो । तर, ख्याल गर्नुस्, कम्तिमा २० सेकेण्ड जति हात धुनै पर्छ ।
धेरै मानिसले छोएको ठाउँमा आफूले छोएपछि र घर बाहिरबाट आएपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।
छालाबाट नसर्ने भएपनि भित्री शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने अंगहरु जस्तै ः नाक, मुख र आँखा छुनु परेमा हात धोएर मात्रै छुने गर्नुपर्छ ।
६० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलको मात्रा रहेको सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर पनि हात धुन सकिन्छ । यद्यपी, विज्ञहरुले साबुन नै बढी प्रभावकारी रहेको बताएका छन् ।
संक्रमण हुन सक्ने ठाउँमा जानु हुँदैन ।
मास्क– कम प्रभावकारी
स्वास फेर्न हावाको स्वच्छता आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण मास्कको प्रयोग गर्नुअघि मास्क प्रयोग गर्ने तरिका र मास्कको गुणस्तर थाहा पाउनु पर्छ ।
मास्कको प्रयोगले संक्रमणको सम्भावना कम गर्ने भनिएपनि यसको प्रभाव थोरै मात्र रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
त्यसकारण सुरुमा संक्रमित र संक्रमितको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिले भने मास्कको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि ‘एन–९५ मास्क’ सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भने त्यसपछि ‘सर्जिकल मास्क’ प्रभावकारी हुन्छ ।
अन्य मानिसहरुले हाच्छ्युँ गर्दा टिस्यु पेपरको प्रयोग गरेर फाल्नु र अर्काे मानिस भन्दा कम्तिमा १ मिटर दुरी राख्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै, प्रयोग गरिरहेको मास्क जथाभावी खोलेर, मास्क लगाएकै बेला त्यसैमा हाच्छ्यु गरेपछि फेरि त्यही मास्क लगाउनु भन्दा नलगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
यदि लक्षण देखियो भने के गर्ने ?
यदि ज्वरो र लगातार खोकीको लक्षण देखियो भने आत्तिनु पर्दैन । यो मौसमी रुघाको लक्षण हो । यद्यपी प्रकोप फैलिएको देशबाट र संक्रमितको सम्पर्कबाट आएको अवस्था हो भने सबैभन्दा पहिले कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि हालतमा नजाऊँ । त्यसको साटो अस्पताल गएर चेकजाँच गराऊँ । साथै, परिवारमा रहँदा आफू छुट्टै बसौँ ।
(विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार एजेन्सी र अन्य स्रोतहरुको अध्ययनका आधारमा)